Ny masoko mahita ny famonjena anao - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > toriteny > Ny masoko dia mahita ny famonjenao
Ny teny filamatra amin'ny Matso an-dalambe androany any Zurich dia ny hoe: "Dihy ho an'ny fahafahana". Ao amin'ny tranokalan'ny hetsika dia mamaky isika: «Ny Street Parade dia fampisehoana dihy ho an'ny fitiavana, fiadanana, fahalalahana ary fandeferana. Miaraka amin'ny teny filamatra an'ny Matso an-dalambe “Dance for Freedom”, nataon'ny mpikarakara ho lohalaharana ny fahalalahana ”.
Ny fanahin'ny fitiavana, ny fandriam-pahalemana ary ny fahalalahana dia niahiahy ny olombelona foana. Mampalahelo anefa fa miaina ao anatin'ny tontolo iray mifanohitra tanteraka isika: mankahala, ady, fahababoana ary tsy fandeferana. Ireo mpikarakara ny Street Parade pose Mifantoha amin'ny fahalalahana. Inona anefa no tsy fantatr'izy ireo? Inona no dikan'ny hoe lasa jamba? Ny tena fahafahana dia mitaky an'i Jesosy ary i Jesosy no tokony hifantoka! Dia avy eo ny fitiavana, ny fandriam-pahalemana, ny fahafahana ary ny fandeferana. Avy eo dia afaka mankalaza sy mandihy ianao! Mampalahelo fa mbola tsy azon'ny maro ankehitriny io fahalalana mahafinaritra io.
“Fa raha miafina ny filazantsaranay, dia misy izany miafina amin'izay ho very, dia ny tsy mino, izay efa nohajambain'Andriamanitr'izao tontolo izao ny sainy, mba tsy hahitany ny famirapiratan'ny filazantsaran'ny voninahitr'i Kristy, Izay endrik'Andriamanitra. Fa tsy ny tenanay no torinay, fa Kristy Jesosy ho Tompo, fa ny tenanay dia mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy. Ho an'Andriamanitra izay nanao hoe: Avy ao amin'ny maizina no hiposahan'ny mazava! izy izay namirapiratra tao am-ponay ho famirapiratan’ny fahazavan’ny fahalalana ny voninahitr’Andriamanitra eo amin’ny tavan’i Jesosy Kristy » (2 Korintiana 4,3- iray).
Jesosy dia jiro tsy hitan'ny tsy mino.
Simeona dia lehilahy marina sy tia an’Andriamanitra tany Jerosalema ary tao aminy ny Fanahy Masina (Lio 2,25). Nampanantena izy fa hahita ny voahosotr’i Jehovah alohan’ny hahafatesany. Rehefa nentin’ny ray aman-dreniny tao amin’ny tempoly i Jesoa zaza ka notrotroiny, dia nidera an’Andriamanitra Izy ka nanao hoe:
«Eny, Tompo ô, araka ny teninao, dia alefanao amin’ny fiadanana ny mpanomponao; fa ny masoko efa nahita ny famonjenao, izay namboarinao teo amin’ny firenena rehetra, dia fahazavana ho fanambarana ho an’ny jentilisa sy ho voninahitry ny Isiraely olonao” (Lio. 2,29- iray).
Tonga toy ny jiro hanazava an'ity tontolo ity i Jesoa Kristy.
«Avy ao amin’ny maizina no hiposahan’ny mazava! izy izay namirapiratra tao am-ponay ho famirapiratan’ny fahazavan’ny fahalalana ny voninahitr’Andriamanitra eo amin’ny tavan’i Jesosy Kristy » (2 Korintiana 4,6).
Ny fahitana an'i Jesosy Kristy dia traikefa niainana ho an'i Simeona, ilay foto-dehibe talohan'ny nahafahany nanao veloma izao fiainana izao. Rahalahy, nahalala ny famonjen'Andriamanitra amin'ny voninahiny rehetra ve ny masontsika? Zava-dehibe ny tsy hanadino ny haben'ny fitahian'Andriamanitra antsika amin'ny fanokafana ny masontsika amin'ny famonjena:
«Tsy misy mahay manatona Ahy raha tsy taomin’ny Ray izay naniraka Ahy; ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Izao no voasoratra ao amin’ny mpaminany: “Ary izy rehetra dia hampianarin’Andriamanitra”. Izay rehetra nandre sy nianatra tamin’ny Ray dia manatona Ahy. Tsy hoe nisy nahita ny Ray, afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra ihany no nahita ny Ray. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izaho no mofon’aina. Ny razanareo nihinana ny mana tany an-efitra, dia maty. izany dia ny mofo midina avy any an-danitra hohanina fa tsy ho faty. Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra; raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy. Fa ny mofo izay homeko dia ny nofoko ho fiainan’izao tontolo izao” (Jaona 6,44- iray).
Jesosy Kristy no mofo velona, ​​famonjena ataon'Andriamanitra. Mbola tsaroantsika ve ny fotoana nanokanan'Andriamanitra ny masontsika amin'ity fahalalana ity? Tsy hohadinoin'i Paul ny fotoana nanazavana azy, mamaky momba izany isika rehefa nandeha an-dàlana nankany Damaskosy izy:
“Fa nony tonga tany izy, dia tonga tany Damaskosy. Ary nisy mazava avy any an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy; ary lavo tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika Ahy? Fa hoy izy: Iza moa ianao, Tompoko? Fa izy : Izaho no Jesosy izay enjehinao. Fa mitsangàna, ka mankanesa any an-tanàna, dia holazaina aminao izay tokony hatao! Fa ireo lehilahy izay niaraka taminy teny an-dalana dia nijanona tsy nahateny, satria nandre ny feo, nefa tsy nahita na iza na iza. Fa Saoly nitsangana tamin'ny tany. Fa rehefa nisokatra ny masony, dia tsy nahita na inona na inona izy. Ary notarihiny tamin'ny tànany izy ka nentiny nankany Damaskosy. Ary tsy nahita izy nandritra ny hateloana, sady tsy nihinana na nisotro » (Asan’ny Apostoly 9,3- iray).
Nanaitra an ’i Paoly tokoa ny fanambarana momba ny famonjena ka tsy nahita nandritra ny 3 andro!
Hatraiza ny isan'ny jirony nihatra taminay ary nanao ahoana ny fiovan'ny fiainantsika hatramin'ny nahitan'ny masontsika ny famonjeny? Tena famerenam-pahafahana tokoa ho antsika sy ho antsika ve izany? Andao henontsika ny resaka miaraka amin'i Nikodemosy:
« Fa nisy Fariseo atao hoe Nikodemosy, mpanapaka ny Jiosy. Nankeo aminy izy nony alina ka nanao taminy hoe: Raby ô, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra Hianao, satria tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao, raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy tsy ateraka indray, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: Hataon'ny olona ahoana no hateraka rehefa antitra izy? Moa afaka miditra ao an-kibon-dreniny fanindroany va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. [Jaona 3,6] Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy. Aza gaga noho ny nilazako taminao hoe: Tsy maintsy hateraka indray hianareo” (Jaona 3:1-7).
Mila "fahaterahana" vaovao ny olombelona mba hahafantarana ny fanjakan'Andriamanitra. Jamba ny mason'ireo famonjena an'Andriamanitra. Na izany aza, ny mpikarakara ny Street Parade any Zurich dia tsy mahalala ny fahajambana ara-panahy amin'ny ankapobeny. Izy ireo dia nametraka tanjona ara-panahy tsy ho vitan'ny tsy misy an'i Jesosy. Tsy afaka mahita ny voninahitr'Andriamanitra ho an'ny tenany ny olombelona na tsy mahafantatra azy manontolo. Andriamanitra no manambara ny tenany amintsika:
«Tsy izaho no nifidy anao, fa izaho no nifidy anao sy ianao Mitandrema tsara mba handeha sy hamoa, ary haharetan’ny vokatrareo, mba homen’ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ny anarako na inona na inona” (Jaona 1.5,16).
Ry mpirahalahy, isika dia manana tombontsoa lehibe izay hitan'ny masontsika ny famonjen'Andriamanitra: "Jesosy Kristy Mpanavotra antsika ”.
Izany no traikefa manan-danja indrindra azontsika atao amin'ny fiainantsika manontolo. Tsy nisy tanjona hafa teo amin’ny fiainana ho an’i Simeona taorian’ny nahitany ny Mpamonjy. Tratra ny tanjony teo amin’ny fiainany. Mitovy lanja amintsika koa ve ny fanekena ny famonjen’Andriamanitra? Anio aho dia te hamporisika antsika rehetra tsy hanala ny masontsika amin'ny famonjen'Andriamanitra ary hibanjina mandrakariva an'i Jesosy Kristy (ara-panahy).
“Raha niara-natsangana tamin’i Kristy ianareo ankehitriny, dia tadiavo ny any ambony, izay itoeran’i Kristy, izay mipetraka eo ankavanan’Andriamanitra! Eritrereto ny any ambony fa tsy ny ety an-tany! Fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Rehefa hiseho Kristy ny fiainanareo, dia hiara-miseho aminy amin’ny voninahitra koa ianareo » (Kolosiana 3,1- iray).
Nampirisika i Paoly fa tsy hijery izay eto an-tany fa amin'i Kristy. Tsy misy na eto an-tany izay afaka manelingelina antsika amin'ny famonjen'Andriamanitra. Izay tsara ho antsika dia avy any ambony fa tsy avy amin'ity tany ity:
«Aza mety ho diso, ry rahalahy malalako! Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia midina avy any ambony, avy amin’ny Rain’ny mazava, izay tsy misy fiovàna na fiovaovan’ny aloka. » (Jakoba) 1,16- iray).
Nahatsapa ny famonjen'Andriamanitra ny masonay ary tsy tokony hanaisotra ny masontsika intsony isika amin'ity famonjena ity, mijery hatrany. Nefa inona no dikan'izany rehetra izany eo amin'ny fiainantsika andavan'andro? Isika foana dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra, fisedrana, aretina, sns. Ahoana no ahafahana mijery an'i Jesosy na dia misy fanelingelenana lehibe toy izany aza? Nanome ny valiny i Paul:
« Mifalia mandrakariva ao amin’ny Tompo! Te-hiteny indray aho hoe: mifalia! Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny halemem-panahy; akaiky ny Tompo. Aza manahy na inona na inona; ary ny fiadanan’Andriamanitra, izay tsy takatry ny saina, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin’i Kristy Jesosy” (Filipiana). 4,4- iray).
Mampanantena antsika Andriamanitra fa hanana fiadanan-tena sy fiadanam-po "mihoatra noho ny antony rehetra". Tokony hapetrantsika eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny ahiahiny sy ny filantsika. Voamarikao ve fa voavaly ny vavaka ataontsika ?! Fa io ve: "Ary hamaha ny olantsika rehetra sy ny olantsika rehetra Andriamanitra ary hesoriny amin'izao tontolo izao"? Tsia, tsy misy ny fampanantenana eto fa hamaly na hanaisotra ny olantsika rehetra Andriamanitra. Ny fampanantena dia: "Ary ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra lavitra noho ny eritreritra rehetra, dia hiambina ny fonao sy ny fisainanao ao amin'i Kristy Jesosy".
Raha mibanjina isika, dia ento manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra, mampanantena antsika fiadanana goavambe sy fifaliana ara-panahy lalina Andriamanitra, amin'ny toe-javatra rehetra. Amin'izay dia tena miantehitra aminy isika ary mandry eo an-tanany.
«Izany no nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Manana fahoriana amin'izao tontolo izao ianao; fa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao » (Jaona 16,33).
Tandremo: Tsy mandeha amin'ny fialan-tsasatra fotsiny isika ary matoky fa handray andraikitra amin'ny andraikitra rehetra Andriamanitra. Misy kristiana izay manao tsara an'ireo hadisoana ireo. Mampifanaraka ny fahatokisana an'Andriamanitra amin'ny tsy fandraisana andraikitra izy ireo. Na izany aza, mahaliana ny hahitana ny fomba anehoan'Andriamanitra famindram-po lehibe amin'ny toe-javatra toy izany. Aleo ny matoky an'Andriamanitra noho ny mandray ny fiainantsika eo an-tànantsika.
Na izany na tsy izany dia tsy maintsy manohy mandray andraikitra isika, fa tsy matoky ny herintsika intsony fa ao amin'Andriamanitra. Amin'ny ambaratonga ara-panahy dia tsy maintsy fantatsika fa i Jesoa Kristy no famonjena antsika ary hany fanantenana tokontsika ary tokony hijanona tsy hiezaka ny hamoa voa ara-panahy amin'ny herintsika manokana isika. Tsy hahomby ihany koa ny Street Parade. Vakiantsika ny Salamo 37:
«Matokia an’i Jehovah, ka manaova soa; mitoera amin'ny tany ary mitandrema amin'ny fahamarinana; ary raha mifaly amin'ny Tompo ianao, dia homeny anao izay irin'ny fonao. Ankino amin’i Jehovah ny lalanao, ka matokia Azy, dia hataony toy ny mazava ny fahamarinanao, ary ny fahamarinanao tahaka ny mitataovovonana. » (Salamo 3.7,3- iray).
Jesosy Kristy no famonjena antsika, manamarina antsika izany. Mila manankina ny fiainantsika tsy misy fepetra aminy isika. Na izany aza, aza misotro ronono akory, fa "manaova soa" ary "mahatoky". Raha mifantoka amin'i Jesôsy ny famonjena antsika, dia amin'ny tànana azo antoka isika. Andao hamaky indray isika ao amin'ny Salamo 37:
“Ny dian’ny olona dia voatazon’i Jehovah, ka ny lalany no tiany; raha lavo izy, dia tsy ahinjitra, fa Jehovah no manohana ny tanany. Mbola tanora sy efa antitra koa aho, nefa tsy mbola nahita olo-marina nafoy, ary ny taranany tsy nangataka hanina; isan'andro dia tsara izy ka mampisambotra mbamin'ny taranany ho fitahiana » (Salamo 37,23- iray).
Raha manolotra ny lalantsika amin'Andriamanitra isika, dia tsy hiala amintsika mihitsy.
«Tsy hamela anareo ho kamboty Aho, hankaty aminareo. Kely iray hafa ary izao tontolo izao tsy mahita Ahy intsony; Fa mahita Ahy ianareo, satria velona Aho, dia ho velona koa ianareo. Amin’izany andro izany dia ho hitanareo fa Izaho ao amin’ny Raiko, ary ianareo ato amiko, ary Izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina azy dia izay tia Ahy; fa izay tia Ahy no ho tian’ny raiko; ary Izaho ho tia azy ka haneho ny tenako aminy” (Jaona 14,18- iray).
Na dia niakatra teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra aza i Jesosy dia nilaza fa ny mpianany dia nahita azy foana! Na aiza na aiza misy antsika sy na inona na inona toe-javatra iainantsika, dia i Jesoa Kristy, famonjena antsika, dia hita hatrany ary ny masontsika dia tokony hibanjina azy foana. Ny fangatahany dia:
“Mankanesa atỳ amiko, ianareo rehetra miasa mafy sy mavesatra entana! Ary homeko fitsaharana ianao. Ento ny ziogako ka mianara amiko! Fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po Aho, ary "dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo"; fa malefaka ny ziogako ary maivana ny entako » (Mat 11,28- iray).
Ny fampanantenany dia:
«Na dia tsy mitoetra eo aminareo aza aho, dia tokony hanana fiadanana ihany ianareo. Omeko anareo ny fiadanako; fiadanana izay tsy azon’iza na iza omena anao. Koa aza manahy na matahotra!" (Jaona 14,27 Fanantenana ho an'ny rehetra).
Androany i Zurich mandihy amin'ny fandriampahalemana sy ny fahalalahana. Andao hankalaza ihany koa satria nahalala ny famonjen'Andriamanitra ny masontsika ary mivavaka isika fa mihamaro hatrany ny mahita sy hahafantatra izay nambara tamintsika tamin'ny fomba mahagaga: «Ny famonjena famonjena nataon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy!»
by Daniel Bösch